Arjiga shaqada iyo waxbarashada iyo waayo aragnimada shaqada (CV) – Shaqodoon
Inta badan marka aad codsaneyso boos shaqo waxaad shaqo-bixiyaha u direysaa codsi shaqo iyo CV, ( qoraalka qof ka warranka. Ku qor codsiga iyo CV’ga isla luqadda uu ogeysiiska booska shaqadu ku qoran yahay.) Ujeeddada codsiga shaqadu waa kicinta xiisaha shaqo-bixiyaha si aad ugu gudubto wareysiga shaqada.
Mar kasta oo aad shaqo cusub codsaneyso qor codsi cusub CV’gaadana waqtiga la jimee. Toos ayaad codsiga ugu qori kartaa Halkan ama waxaad qoraalka qof ka warranka lifaaq ahaan kula diri kartaa Email ahaan. Mar kasta ka dhig lifaaqyada aad ku direyso PDF. Waxaad inta badan codsiga iyo CV’ga ka dhex-diri kartaa bogagga shabakadda shaqodoon.net Codsiga shaqadu wuxuu mararka qaar noqon karaa fiidiyow, boortofooliyo ama tusaale ahaan bog-shabakadeed.
Keydso shahaadooyinka aad ka heshay meelihi hore ee aad ka soo shaqeysay iyo waxbarashooyinkaadiba. Xusuusnow in aad mar kasta codsato in shahaado lagaa siiyo marka aad meel shaqo u joogtay, tababar u joogtay ama aad wax ka baratay. Shaqo-bixiyaha waxaa waajib ku ah in uu shahaado shaqo ku siiyo xittaa toban sano ka dib dhamaanshihi xiriirka shaqada. Inta badan looma baahna in shahaadooyinka shaqada horay loogu sii diro shaqo-bixiyaha, laakiin waxaa wanaagsan in horay loo sii qaato marka wareysiga shaqada la aadayo, si aad u tusto haddii uu shaqo-bixiyuhu u baahdo.